Macallin Jose Mourinho oo ka hadlay soo laabashada tababare Zinedine Zidane ee kooxda Real Madrid – Gool FM
Macallin Jose Mourinho oo ka hadlay soo laabashada tababare Zinedine Zidane ee kooxda Real Madrid
(Madrid) 25 Maarso 2019. Tababaraha reer Portugal ee Jose Mourinho ayaa la la xiriirinayey inuu dib ugu soo laaban doono garoonka Bernabeu, laakiin waxa uu soo jeediyey in macallinka reer France ee Zinedine Zidane uu u qalmay inuu booskaas qabto.
Jose Mourinho ayaa sheegay inuu rumeysan yahay in Zinedine Zidane uu yahay shaqsiga ku habboon kursiga tababarennimo ee kooxda Real Madrid.
Zidane ayaa dib loogu magacaabay macallinka kooxda Real Madrid bilowgii bishaan kaddib kaliya 10 bilood oo uu ka maqnaa booskaas markii uu iscasilay.
Macallinka reer France ayaa bedelay Santiago Solari kaasoo qudhiisu shaqada kooxda Real Madrid ka bedelay Tababare Julen Lopetegui horraantii xilli ciyaareedkan 2018-19.
Mourinho ayaa laftiisa la la xiriirinayey booskaas oo la filayey in Los Blancos ay dib ugu wacan doonto, laakiin macallinka reer France ee Zidane ayay magacawdeen, waxaana hoggaamiyaha reer Portugal uu sheegay in Zizou uu u qalmay booskaas uuna yahay shaqsiga ku habboon.
Mourinho ayaa kooxda Real Madrid macallin u ahaa laga soo bilaabo sanadkii 2010-kii illaa 2013-kii, laakiin Los Blancos ayaa ka doorbiday inay dib ugu ceshato Zidane oo la qaaday saddex Champions League oo xiriir ah.
“Uma maleynaayo inaan ka hadli karno wali waxa ku saabsan waayahiisa.” ayuu Mourinho oo ka hadlayey Zidane u sheegay Canal Plus.
“Laakiin waqti aad u gaaban isagu waxa uu sameeyay wax uusan qofna horay u samaynin, taasina waa inuu hantay saddex Champions League oo xiriir ah.”
“Hadda wuxuu bilaabay tallaabo kale oo waayahiisa ah, isagu waa inuu dhiso koox, waa inuu sameeyo doorashooyin, soo iibsado ciyaartoy, kuwa kalena iska iibiyo, waa inuu tababar la qaato iyaga oo uu ka dhaadhiciyo falsafaddiisa ciyaareed.”
“Aniga waxay ila tahay inuu yahay shaqsiga ugu fiican ee kooxdan.”
Jose ayaa doonaya inuu garoomada dib ugu soo laabto xilli ciyaareedka soo aaddan kaddib markii shaqada tababarennimo ee kooxda Manchester United laga cayriyey bishii December ee sanadkii tagay.
Hadal kooban ee kasoo baxay Zidane oo go’aamin kara mustaqbalka xidig ka tirsan Real Madrid